Garoowe oo laga Taageeray Gollaha Wasiirada cusub ee Federaalka Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Garoowe oo laga Taageeray Gollaha Wasiirada cusub ee Federaalka Soomaaliya
GAROOWE – Waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe kulan ballaaran oo lagu taageerayey gollaha wasiirada cusub ee 21-kii bishan uu soo dhisay Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Kulankan taageerada ah oo ka dhacay xarunta gobolka Nugaal ayaa waxaa ka qeybgalay waxgarad,siyaasiyiin iyo sidoo kale mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland.
Waxgaradkii iyo mas’uuliyiintii kale ayaa hadal ka jeediyey kulankan,waxayna sheegeen in ay soo dhaweynayaan Xukuumadda cusub ee Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre,iyagoona sheegay iney la shaqeyn doonaan.
Islaan Ciise Islaan Maxamed oo kamid ah Waxgaradkii hadalka ka jeediyey kulanka ayaa ku baaqay in carqalada laga daayo Xukuumadda cusub isla markaana laga ilaaliyo wax walba oo shacabka kala geynaya dalkana dib u dhigaya.
Wixii Soomaaliya ragaadinaya ama dib u dhac ku keenaya hanalaga daayo,Soomaaliya waxa ay soo martay weynu ognahay,waxaan dooneynaa inaan hadda taageerno xukuumaddan si ay dalka iyo dadka wax ugu qabato”ayuu yiri Islaanku.
Xildhibaan Cabdi Samatar oo kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in markii horeba ay taageereen Farmaajo ,Kheyre sidaas darteedna ay taageerayaan Xukuumadda cusub.